बर्स प्यान्ट: निर्देशन, अनुप्रयोग विशेषताहरू, प्रशंसापत्रहरू
हालै, पर्यावरण अनुकूल कच्चे मालबाट बनेको अधिक र अधिक सान्दर्भिक र साधारण हो। यो तथ्यको कारण हो कि महानगरीय क्षेत्रहरूमा बाँचिरहेका व्यक्तिहरू, प्रदूषण र हानिकारक उत्सर्जनबाट भरिएका व्यक्तिहरू आफैंका घरहरूको पर्खाल भित्र पनि नकारात्मक प्रभावबाट बच्न चाहन्छन्। विशेष गरी, यो पेंट र वार्निश सामग्री मा लागू हुन्छ, जुन अनुप्रयोगको समयमा र सुखाने को समयमा हानिकारक पदार्थ जारी गर्न सक्छ। यसैले धेरै यौगिहरु श्वेतकारहरुमा लागू हुनु पर्छ, रङ को सुखाने चरण सम्म पूरा नभएसम्म लामो कोठा को लागि छोड दिए छ।
बेकर पेंट पर्यावरण अनुकूल सामग्रीबाट बनाइएको छ। यसमा विभिन्न उद्देश्य हुन सक्छ। यदि तपाईंले यस निर्माताको सामानहरू खरीद गर्न पनि निर्णय गर्नुभयो भने, तपाईंले बिक्रीको लागि प्रस्तावित विकल्पहरूको विभिन्न किस्महरूको गुणस्तरका बारे थप जान्नै पर्छ। यसले तपाईंलाई एक रचना चयन गर्न अनुमति दिन्छ जसको लागि तपाइँले अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न अति भुक्तानी गर्नुहुन्न। त्यसैले, उदाहरणको लागि, घरमा भित्रको मुखौटा रंगको प्रयोग निर्दोष छ, किनभने यो अधिक महंगी छ। तर भवन बाहिरको गृहकार्यको लागि रंगको प्रयोग सतह उपस्थितिको द्रुत क्षति हानिकारक हुन सक्छ, किनकि यस्तो यौगिकहरू प्रतिकूल प्रभावहरू जस्तै वर्षा, बर्फ आदि जस्ता उद्देश्य होइनन्।
Beckers Akrylatfarg Façade Paint
यो ऐक्रेल-लेटेक्स कम्जाउन्ड facades को लागि, drainpipes को परिष्करण, धातु शीट को sheathing, कंक्रीट को सतहहरु, साथ नै काठ, प्लास्टर। उपभोक्ताहरू पहिले नै उत्पादनको गुणस्तर निर्धारण गर्न व्यवस्थित छन् कि यो उत्कृष्ट गुणहरू छन्, बाह्य वातावरणको प्रतिरोध, तपाईंलाई तुरुन्तै विभिन्न रचनाहरूको सतहमा मिश्रण लागू गर्न अनुमति दिन्छ। अन्य चीजहरू बीच, निर्माता बेकरहरू (हामी विचार गरौं यो कम्पनीको मुखौटा रंग) ले यसको उत्पादनहरूको लागि एकदम कम लागत स्थापित गरेको छ, जसले ग्राहकहरूको ध्यान आकर्षित गर्छ।
मुखौटा रंगको सतहको विशेषता: सतह तयारी
पर्खालहरू एक-अर्का नजिकका साथै पेप्ट चढ्ने पेटीका ओभरहोङङ शाखाहरूबाट मुक्त हुनु पर्दछ। यदि एउटा लान हो भने, यसको सतह सुरक्षा तम्बू संग ढाकिएको छ। अघिल्लो, बिरुवामा धेरै सानो छेदहरू बिरुवा लगाउन अनुमति दिन्छ। मुखौटामा, सबै धातु वस्तुहरू बन्द, टिका र हुकको प्रकारले सुरक्षित गरिनुपर्छ। निर्माण टेपले ढोका र विन्डो फ्रेमहरू बन्द गर्नेछ।
बेकर्स पेन्ट, समीक्षाहरू केवल सकारात्मक छ, सफा सतहमा लागू गर्न सकिन्छ, पछि उच्च दबाव वाशरसँग धोइन्छ। यदि तपाईं ढीलो र खुसी सतहको साथ काम गर्न चाहानुहुन्छ, त्यसोभए प्रारम्भमा यो प्राइमरलाई बलियो बनाउने, जो आसंजनको गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक छ।
पुरानो प्यान्ट, पर्खाल छोडेर, कडा ब्रशसँग हटाइनेछ, र त्यसपछि पोटी को तह राख्नुहोस्। अवस्थित दरारहरू, जसको चौडाई 0.5 मिलिमिटर पुग्छ, सम्पूर्ण लम्बाइमा खोलिएको, स्क्रैर प्रयोग गरेर र धूल सफा गर्न सकिन्छ। अर्को, प्रत्येक दरार भित्र पलस्टर आउटडोर कामको लागी लागू हुन्छ । अनियमितताहरू सीलेंटसँग भरिएको छ। यसको आवेदन दुई परतहरुमा फैलाउनु पर्छ, किनकि यसले गर्दा डुब्छ। सतहमा अन्ततः स्पट्युलबाट बाहिर निस्कन्छ।
यदि तपाईं बेकर उत्पादनहरू छनौट गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, यस निर्माताको स्वीडेनबाट प्यान्ट र वार्निशले केहि निश्चित प्रविधिको प्रयोग गरी लागू गर्नुपर्छ। यसको लागि प्रयोग एउटा रोलर हो जसले रचनालाई तेर्सो स्ट्रिपहरूसँग लागू गर्न अनुमति दिन्छ। एकपटक तपाईंले 120 सेन्टिमिटर उचाइमा प्रशोधन गरे पछि, रोलरलाई रंगमा ताजा गर्न आवश्यक छ। प्रत्येक 60 सेन्टिमिटरलाई चित्रकला दिशा बदल्नैपर्छ, आंदोलनहरू पूरै अघिल्लो तहमा निर्देशित गरिनुपर्छ। प्रक्रिया पूर्ण भएपछि, सतह रोल रोलर आर्काइवहरू माथि माथिबाट तल लैजान पर्दछ। उपकरणमा अति गाह्रो थिच्नुहोस्, किनकि यस अवस्थामा स्ट्रिपहरू हुन सक्छ।
उपभोग, अनुप्रयोगको लागि समय र सतह सुखाने
माथि उल्लेखित संरचनाको खपत 125 देखि 165 ग्राम प्रति वर्ग मीटर सम्म छ। एक तहको सुखाने समय तीन घण्टाको छ, यो समयको लागी अर्को तह लागू नभएसम्म यो समय हो। सतहहरु धातु, प्लास्टर, काठ, आदि हुन सक्छ।
मुखौटा पेंट बेकर्सको आवेदनको लागि सामान्य सिफारिसहरू
बेकर्स मुखौटा रंग लगभग कुनै सतहमा लागू गर्न सकिन्छ, तथापि तिनीहरू पूर्व-तैयार हुनुपर्छ। यदि यो नयाँ काठको बासिन्दाहरूको प्रश्न हो जुन कारखानाको तरिकामा राखिएको छ, त्यसपछि तिनीहरू ग्याससँग सफा गरिनुपर्छ, गहिराइको पूर्ण हटाउन निश्चित गर्न। यो चप्पिएको पर्खालहरूमा लागू हुन्छ। जब तपाईं काठ को पर्खालहरु संग ढालना संग काम गर्न को लागी हुन्छ, पहिले तपाईंलाई उनलाई विशेष उपकरण जस्तै Ute-Mogeltvatt को उपचार गर्नु पर्छ। अर्को चरणमा सतह प्रवाह गरिन्छ, र ग्रुपोलजा तेलको साथ जोड्न र समुन्द्रहरु प्रशोधन गरिन्छ।
बेकरहरू कंक्रीट सतहहरूमा पनि लागू गर्न सकिन्छ, तर यदि तिनीहरू नयाँ छन् भने निर्माण कार्य पूरा भएपछि दुई महिना अघि यी कार्यहरू सुरू गर्न हुँदैन। सतह माट हुनु पर्छ। प्लास्टिक, एल्यूमीनियम, जस्ती र पेंट गरिएको आधारहरू पहिले नै उल्लेख गरिएको संरचना माल्टावाटमा धोएका छन्, र पछि पानी संग। जंगली क्षेत्रहरु स्टील ब्रश संग सफा गरिन्छ, र एक प्राइमर संग कवर गरिन्छ।
पेंट समीक्षा सुरुचिपूर्ण Vaggfarg Matt
Beckers Vaggfarg Matt Bas A लाटेक्सक्स पानी हो कि कम्पासमा छ कि छत र पर्खालहरू सजाय गर्न प्रयोग गरिन्छ। प्रयोगकर्ताहरूको अनुसार, सुखाने पछि, सतह राम्रो तरिकाले योग्य छ, सब्सट्रेट धोएको हुन सक्छ, यो हाईपोलोर्जेनिक हो, र मिश्रण आफैले प्रीमियम वर्गसँग सम्बन्धित छ। घरका शिल्पकारहरू जोरजस्तै, यो रंग आन्तरिक कामको लागि डिजाइन गरिएको छ, साथसाथै repainting र चित्रकारी छत र पर्खालहरू। यसको साथ तपाईं म्याट सतह प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अवयवहरूका बीच त्यहाँ कुनै अमोनिया यौगिकहरू र साल्वेटहरू छैनन्। प्रयोगकर्ताहरूले दावी गर्छन् कि औसत पेन्ट खपत 1 लीटर प्रति6वर्ग मीटर हो। उत्पादनको घनत्व 1.4 किलोग्राम प्रति लीटर बराबर छ, जुन रंगमा निर्भर गर्दछ।
बेकर्स सुरुचिपूर्ण पाना एक पहिला तयार गरिएको सतहमा लागू हुन्छ, जुन गहिराइ, धूल, र प्राइमसँग उपचार गर्नु पर्दछ। यदि आवश्यक छ भने, सील र जोडिएको जोडहरू, समुद्रहरू, साथसाथै असक्षमता। सब्सट्रेट granular emery कागज संग छीलिएको छ, र अन्तिम पङ्क्ति एक वा दुई तहमा गरिन्छ। कहिलेकाहीँ यो प्वाइन्ट सतह ताजा हुन आवश्यक छ। यस अवस्थामा, यो धोई गर्न आवश्यक छ, र आसन बढाउन को लागी राम्रो भरी सैंडपेपर संग चमकदार रंग को स्पॉट प्रोसेसिंग पछि। यदि सब्सट्रेटमा गोंद रंग छ भने, यो पानीबाट हटाइएको छ। यदि पर्खालमा यस्तो काम गर्न सम्भव छैन भने, एक प्राइमर लागू गर्नु पर्छ। व्हाइटवाड गरिएका सतहहरूलाई ब्रशसँग व्यवहार गरिन्छ, बनाइएको धूल पानीसँग धोएको हुनुपर्छ।
रंगको समीक्षाहरू बेकर बेकरिन 7
बोकर पानी आधारित पानाले सुत्न पछि म्याट सतह बनाउँछ, खपत लगभग 1 लीटर प्रति 8 वर्ग मीटर हुन्छ। यो आन्तरिक कामको लागी हो। प्रयोगकर्ताहरूको अनुसार, यस्तो रंग एकदम कम सुखाने समय फरक छ, गीली सफाईको अधीनमा राख्न सकिन्छ, उत्कृष्ट पानी को उत्कृष्ट गुणहरू छन्। कुनै न कुनै सतह, कंक्रीट, चित्रित, पोटिस सब्सट्रेट, प्लास्टरबोर्ड, साथै सीमेंट, कपडा सतह र चिपपार प्रयोग गर्न सकिन्छ।
प्रयोगकर्ताहरूको अनुसार, धुंधला र सुखाने बेलाको समयमा, धेरै धेरै बेहोसी गन्धलाई छोडिदिन्छ, कोटिंग घने र यहाँसम्म पुग्छ। यो पहिलो लेयरको आवेदन3घण्टा पछि पुन: नामाकरण गर्न सकिन्छ। अभ्यास देखाउँदा, समय भन्दा माथिको सतहले पहेंलो पीडा गर्दैन। बेकर पेंट, जसको उपभोग अपेक्षाकृत कम छ, 2000 धोने चक्र सम्म पुग्न सक्छ, जुन सतह प्रतिरोधी घर्षण गर्दछ।
चित्रकारी गर्नु अघि, सतह सफा गरिएको छ, पुरानो समाप्त को भागहरु लाई सजिलै संग छानिएको र मुख्य द्वारा मुक्त। यदि तपाइँ पुरानो कोटिंग्सहरू पुन: गर्न चाहानुहुन्छ भने, एल्किड, लेटेक्स, र तेल प्यान्टको तहमा मर्टाभट्टसँग खाली गरिएका कुर्सियां। त्यस पछि, सतह पानी संग धोएको छ। यदि अपरेसनहरू ओभरमा गहिराइ भएका क्षेत्रहरू छन् भने, तिनीहरू प्यानिङ सुरु गर्न पछि मात्र प्राइमरसँग व्यवहार गर्नुपर्छ।
एक नियमको रूपमा, पतला को आवश्यकता छैन, र कामको समापन पछि, हेरफेरमा संलग्न सबै उपकरणहरू तुरून्तै पानी संग धोइनु पर्छ। यो सतह को तापमान +5 डिग्री भन्दा कम छ भने चित्रण शुरू गर्न सिफारिस गरिएको छैन।
बेकर्स प्यान्ट अत्यन्त टिकाऊ कोटिंग्स सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, तथापि यस अवस्थामा यो धेरै तहहरूमा लागू गर्न आवश्यक छ, जुन दुई देखि तीन हुन सक्छ। प्रत्येक अर्को तहको अनुप्रयोगसँग छिटो नगर्नुहोस्, अर्को चरण अगाडि बढ्नु अघि पूर्ण रूपमा सुचारु गर्न सतह छोड्न महत्त्वपूर्ण छ।
सिरेमिक टाइलहरूको सामान्य आयाम
लिओनियम को लागि शीत वेल्डिंग: एक किस्म चिपकने वाला र बिछाने को प्रक्रिया को सुविधाहरु
लुकेका लुगहरू: यन्त्रका विशेषताहरू, फाइदाहरू
भान्सामा हुड स्थापना गर्दै: विशेषताहरू
सुस्त प्लास्टर प्रयोग गरेर तपाईंको हातले पर्खाल कसरी विस्तार गर्छ
हांस को व्यञ्जन
जहाँ अरब हो: देश, क्षेत्र, संस्कृति र रोचक तथ्य
आफ्नो खुट्टा च्याउ: लक्षण, उपचार
कसरी मचान कटेज निर्माण गर्न
कागज कसरी बनाउने सोच? भन्नुहोस्!
Cadet पार्टी: इतिहास र कार्यक्रम
कसरी आफ्नो कम्प्युटर Hay दिन मा स्थापना